Iibso Warqada Muddada: Kireyso khadka tooska ah Qorahaaga Qormo ee Soomaaliya
Iibso Warqad Muddo ah Soomaaliya si aad ugu guuleysato natiijooyinka laba jeer sida ugu dhakhsaha badan!
Qorayaal aqoonyahano aqoon leh iyo 24/7/365 taageero, ayaa hadda laga heli karaa Soomaaliya! Waxaan bixinnaa adeegyo Iibso Waqtiga Iibinta iyo daryeelka waqtigaaga iyo asturnaantaada
Xaqiiqooyinka ku saabsan Iibsiga Waraaqaha Muddada
Waxaa jira meelo badan oo laga iibsado warqad xilliyeed khadka tooska ah. Laakiin waxay u baahan tahay degel lagu kalsoonaan karo si looga soo saaro warqad tayo leh, oo aan lahayn khayaano. Bogagga qaarkood waxay u muuqdaan kuwo sumcad leh, ganacsato idman oo waraaqaha ah laakiin qaar badan ayaa ah kuwa wax soo saara oo tayo hooseeya iyo khiyaamo. Qaar kale waxay iibiyaan warqad aan tayo fiican lahayn, sida koobi. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad wax ka iibsato ganacsade lagu kalsoonaan karo oo sumcad ku leh iibinta shaqo tayo leh.
Ganacsade sumcad leh ayaa bixiya dammaanad iyo siyaasad soo noqosho cadaalad ah. Sidoo kale, waa inay ku sheegaan siyaasadooda iibinta inay kaliya iibinayaan nuqulada asalka ah iyo kuwa la xaqiijiyay. Waa sharci daro iyaga inay ku iibiyaan shaqooyinka dib loo iibiyey iyagoo ku been abuuraya maxaa yeelay ma awoodi doonaan inay wax macaash ah ka helaan iibinta kuwaas. Ganacsade dhab ah ayaa sidoo kale bixiya nuqullo asal ah, oo la xaqiijiyay isla markaana dammaanad qaadaya in warqaddu noqon doonto mid asal ah isla markaana u dhiganta nooca qoritaanka ee loo adeegsaday qorista.
Qorayaashu mararka qaarkood waxay ku iibsadaan warqad erey-bixin ah khadka tooska ah iyagoo aan ogeyn inay jiraan dhibaatooyin ka jira warqadda iyo dammaanad qaadkiisa. Ganacsatada qaarkood waxay been ka sheegaan dammaanadaha ay bixiyaan oo la mid ah kuwa ay bixiyeen qorayaasha kale. Waxay sheeganayaan inay iibinayaan 100% nuqul asal ah oo ka yimid qorayaasha la aasaasay. Dammaanad qaadyada noocan ah badanaa waa kuwo aan ansax ahayn maaddaama qorayaashu aysan heshiis gaar ah la lahayn ganacsatada arrintaas. Qorayaasha waraaqaha noocan oo kale ah ka iibsada goobaha noocan oo kale ah waxay ku dambeeyaan tayo liidata oo wax badan ayey ku bixiyaan mudnaanta.
Qorayaasha iibsada waraaqda ereyga ee khadka tooska ah waa inay si fiican u baaraan sumcadda iibiyaha ka hor inta aysan samayn maalgashi. Iibiyeyaasha sumcadda leh waxay bixiyaan dammaanad ka dhan ah xatooyada oo gadaal ayey ka taagan yihiin. Sidoo kale, dammaanadaha ayaa sheegaya waxa dhacaya haddii warqadda aan loo qorin si waafaqsan qeexitaannada. Tusaale ahaan, haddii warqadda cilmi-baarista ay qortay oo ay ansaxisay waax cilmi-baaris ah ka dibna loo jeedsaday loona adeegsaday fasal qoraal ah, dammaanad-qaadku wuxuu sheegayaa in qoraaga uu mas'uul ka yahay keliya nuxurka ugu dambeeya. Xaaladaha qaarkood, warqadda waxaa fiiriya guddi ka hor inta aan la ansixin in la daabaco.
Qaab kale oo qorayaasha looga faa'iideysan karo markay iibsanayaan waraaqaha ereyga ee internetka waa iyada oo laga fogaado qorayaasha bixiya dib u eegista qiimo ka jaban alaabta ugu dambeysa. Iibiyeyaasha sumcadda leh waxay garwaaqsadaan in qofna uusan rabin inuu iibsado warqad xilliyeed oo si ballaaran dib loogu eegay tan iyo markii ugu horreysay qoraalka. Waa run in arday badan ay sifiican wax u bartaan marka maaddada lagu barto qaabkeeda asalka ah.
Ardaydu waxay ka iibsan karaan warqad cilmi baaris khadka tooska ah shabakadaha lagu kalsoon yahay. Maaddadu waa inay buuxisaa dhammaan heerarka ay dejiyeen hay'adaha imtixaanka qaranka waana in loo qoraa habka ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Si ardaydu u gaaraan hadafkooda ah inay ku aflaxaan imtixaanka koorsada, warqaddu waa inay noqotaa mid heer sare ah. Haddii aysan ahayn, dadaalka ardayda ayaa laga yaabaa inuu jahwareer ku yimaado. Dhinaca kale, haddii warqadda si wanaagsan loo qoro oo ay buuxiso dhammaan shuruudaha kale, waxaa la siin doonaa cinwaanka Warqadda ugu Fiican, taas oo ku dhiirrigelin doonta ardayda inay sii wataan waxbarashadooda.
Jaamacado badan ayaa sidoo kale ardayda uga baahan inay iibsadaan waraaqaha teeramka si ay isaga diiwaan geliyaan koorsooyinka. Ardayda waxaa looga baahan yahay inay ka iibsadaan buugaagtan gaarka ah dugsiga ay damacsan yihiin inay ku qaataan koorsooyinka. Haddii aysan qorin, ma awoodi doonaan inay iska diiwaangeliyaan koorsooyinka. Iskuulada qaar ayaa sidoo kale ku adkeynaya ardayda inay qoraan ugu yaraan 50% waraaqaha si ay isu qoraan. Isla waxaas ayaa khuseeya ardayda iibsata waraaqaha teeramka oo tiro badan; si ay ugu aflaxaan imtixaanka waa inay iibsadaan buugaag qaas ah.
Ardaydu waxay iibsan karaan buugaag qaas ah oo la mid ah waxyaabaha ku jira agabyada tixraaca, oo ay soo iibsadeen si ay ugu gudbaan imtixaanka. Si kastaba ha noqotee, ma nuqulan karaan ama uma isticmaali karaan ilaha tooska, maadaama tan loo fasiri karo inay tahay xatooyo. Waxaa lagugula talinayaa inaad iibsato mashruuc xilliyeed iyo buugag tixraac si looga fogaado jahwareerka. Markuu ardaygu fahmi waayo qalabka gacanta ku jira, waa inuu iibsadaa mashruuc erey ama buug tixraac ah si uu mawduuca u fahmo gebi ahaanba.